Izu - libya-canada.org
Gịnị Ka M Na-eche?
– Izu Iri – 2018
Izu 10 – Ọsọ nke mediocrity na-ekpo ọkụ
Mgbaghara tupu oge niile nke ọtụtụ ndị debanyere aha (4?) Na ịhụnanya na-agụ akwụkwọ parakeet anyị, nke ndị mmadụ niile maara dịka WWIT kachasị ọhụrụ. Azụ ahịa abanyela n’ụzọ nke onye nta akụkọ a na-etinye uche ya na nkọwa niile, yabụ anyị nwere ike ịdị obere karịa na mbụ. (Ikekwe ihe dị mma. Grin)
Nsogbu bụ, mgbe ị na-ewere ihe na-edozi na WWIT mgbe izu iri gachara, ị ga-achọpụta otu ihe doro anya pụtara out.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ nile ka na-agba ọsọ maka Dunn-Edwards Fantasy Football Leagues ‘onyinye kachasị njọ…. A makwaara ya….
2018 “Gịnị ka m na-eche?” Onyinye!
More kindly DFFL”Ọsọ maka Mediocrity” mgbe electronic mesịrị. Protocol na-atụ aro na anyị na-amalitekarị ihe na Expert Section, ebe anyị hụrụ otu onye nwe aha aha DFFL ka ọ bulie egwuregwu ya ruo ọkwa ọzọ-Anthony Pitassi, nke Maazi Go Lucky.
Anthony gbara akara ọzọ zuru oke na izu 10 nke egwu DFFL. Blog t nggụ m, nke a pụtara na Maazị Pitassi enyela akara Expert t asatọn’ime egwuregwu itoolu ikpeazụ ọ gara na otu. Ọ na-enwu ọkụ nwa oge, ugbu a. N’otu aka ahụ, anyị ga-enye onye ndu nke MGL 7 Expert isi maka akara dị ala maka izu ahụ, yana isi ihe amamihe dị t 2 maka izuzu. Mara: Website t akara akara itoolu a t izu 10, MGL na – eduga nchịkọta ahụ website Id ịpịpụta ihe 11.5, yana naanị izu atọ nke egwuregwu oge niile fọdụrụ.
Izu Izu Iri anyị t Expert nke abụọ bụ onye mmeri bụ Jim Francis nke Bolts, onye tufuru naanị 4 isi oche un maka ngwụsị izu, siten’ikike nke Frank Gore. Ka anyị nye ndị Commish 5 Professional ihe maka mbọ ahụ. Izu iri nke ọla nchara na-aga Jesus Cortez nke Mob Squad, onye tufuru naanị 5 isi oche un maka izu ụka. Na-agbakọta ihe niile, anyị ga-enye otu onyinye zuru oke Expert na-egosi nke ọ bụla t Total Tilt Poker, na Baltimore Ravens, na-egbu ndị mmadụ, na ndị Norsemen maka ọnụọgụ ọnụọgụ ha otu izu.
Ọ D OK MMA, lee lee ka ha si guzo mgbe Izu 10 nke 2018 DFFL Guru Section, jiri nanị izu 3 nke aka ekpe….
MGBE MBEN – IZU IRI 10 – DFFL 2018
1. Maazi Go Lucky (43.5 isi) – Anthony gbatịrị onye ndu ya ruo 11.5 isi. Kpọọ ihe osise.
2. Burbank Thumpers (32 isi) – Oge ọjọọ iji nwee izu ụka, chọrọ nnukwu akara, ọsọ ọsọ.
3. Aha gị ebe a (isi 29) – Ryan nwere ikike, mana ọ ga-achọ izu oke izu ụka a
4. Ubi na-egbu egbu (ihe 28) – RIP Le’Veon Bell. Robert emeela nke ọma t even enweghị ya.
5. Mkpọchi (isi 24) – Ezigbo izu nke atụgharịghị na Izu Nine Nine na-egwu v. Nnụnụ ndị ruru unyi
5. Run & Gun (ihe 24) – Ma enwere ike. Know maara ka goofy ọtụtụ nwere ike ị nweta. : -D
7. Trojans (isi 20) – Naanị afọ Andy n’afọ a. Ọ ga-abịaghachi n’ike n’afọ 2019.
7. Baltimore Ravens (isi 20) – Grant nwere anya un t ntanetị, ọ si na ya ebe a.
9. Onye na-ewe ihe ubi (ihe 10) – Ọ bụ 8-na-2. Eji m n’aka na ọ chọghị ịma banyere WWIT a.
10. Otu ndi agha (7 isi) – Agwara m gị na ị ga-agafe m, Jesus.
10. Norsemen (7 isi) – Naanị Cards ‘D / ST nọ na-Rob si a zuru oke na Izu Itoolu
10. Full Tilt Poker (7 isi) – rificjọ – M ugbu a na ikpeazụ ebe. Kedu ihe ngosi dị ukwuu.
Ma akara – Oakland Raiders (9 Kwụ ọtọ, ọ dịghị TD.)
Ugbu a, anyị gafere na ndị na-eme isiokwu nke DFFL, nkewa WWIT. Ndị enyi, anyị nwere ihe ngosi na-aga na oge 2018 DFFL a. Enweghị oge maka nkata na-abaghị uru, ụmụ okorobịa – Ka anyị jụọ ajụjụ ahụ na-ere ọkụ nke nwere ike imerụ ezigbo ahụ….
Ndị nke gị nọ na-a attentiona ntị na Izu Iri Itoolu WWIT rụpụtara nke anyị Jesus Cortez, na naanị otu izu nke egwuregwu, wụpụ website Id 8-ntụpọ, gbagoron’elu ndepụta ahụ, ya na isi itoolu WWIT ọnwụ.
Ndị enyi m, ọ meela ọzọ.
Mba, mba, obughi JESUS. Ọ dịghị onye ọzọ karịa otu n’ime ndị egwuregwu anyị kachasị elu na GENIUS Division, – Ọ dịghị onye ọzọ karịa Andrew Gillette, nke ndị Trojans.
Yabụ, kedu ka ọ dị njọ maka Andy na ngwụsị izu gara aga, ị jụrụ?
Hmm…. Na Andy benched Eric Ebron (MGBE), na-efu ihe 21 t chair.
NA… Ọ nọdụrụ n’elu Derrick Henry (onye na-agaghị?) . 14 isi ihe furu efu.
N’ikpeazụ, Bench na Cowboy D ST, mgbe ị nọ ya. 13 isi ihe.
N’ozuzu ha, ndị Trojans weghachitere 48 isi t seat na Izu Iri nke WWIT, nke, dịka ọ only Mob Squad LAST izu gara aga, emeela ka Trojans dị egwu website Id nọmba 7 ntụpọ, miniature gbagoo elu nke kpokọtara. Ouch.
Ihe nrite ọla ọcha WWIT na Izu Iri na-aga Alan Sullivan nke The Grim Reaper, onye tufuru 25 isi na oche ya, ọ dị mma maka akara 5 WWIT. Bronze Medal of Fultility na-aga Ron Bolton nke’Gunners, onye tufuru 26 isi na oche un maka izu ụka ahụ. Anyị nwere ihe abụọ “bonus” WWIT n’izu a – otu maka Robert Abundis, onye jidere Le’Veon Bell ruo mgbe obi ilu, na otu maka Jose Cano nke Thumpers, maka nkwụsị ntụpọ 20.
Ọfọn, nke ahụ bụ otú e si merie ihe ndị ahụ furu efu d e ngwụsị izu gara aga… Ihe niile a mere bụ ime ka ihe niile sie ike ọbụna ỌZỌ, ma ọ bụghị ihe na-erughị. Ndi otu ano di na uzo 1 nke ebe di elu, na ndi asato di na ato. Nke a ga-abụ ịnyịnya Anụ ọhịa! Ọ D OK MMA, lee ndị a guzogoro mgbe Izu Iri gachara.
G WASN WAS Y I NA-ECHE EGO – IZU 10 IHE – 2018
1. Nsogbu Trojans (-23 isi) – Oge mbụ Andy EVER batara n’elu atọ na WWIT.
1. Kasị njọ Gosi na Akwụkwọ (-23 isi) – Ihe na-agwa m Jizọs agaghị emeri ihe a
3. Hoarse-Men (-22 isi) – Rob si mgbe merie a WWIT aha. Echela na ọ ga-eme ya.
3. Grim Reeker (-22 isi) – Izu 10 nke nsonaazụ bụ ewepu, ọ bụghị iwu. Ụzọ adịghị.
5. Nnụnnụ Unyi (-19 isi) – Kwesịrị ịnọpụ na “Herman Blunder.”
5. Na-enweghị Aha Na-atụ (-19 isi) – Naanị chere maka”Miller Proceed” ahụ.
5. Nwụrụ Anwụ na Ubi (-19 isi) – Ọ meriri ugboro abụọ tupu. Ihe ọ bụla kwere omume.
5. Pop-Gun Run (-19 isi) – Umm, ee, ee, agbanwebeghị m echiche m. Ụzọ adịghị.
9. Mara Mma Ogbe Burbank (-16 isi) – M ka na-echeghị.
10. Poker zuru ezu (-11 isi) – Hel, m ka nwere ike imeri ihe a. Emere m un tupu mgbe ahụ.
11. Maazi abughi-ka-chioma (-10 isi) – Ekwe Omume 2018 Enforcement Division champ.
11. Dolts (-10 isi) – Chefuo ya. Ohere ka mma nke Jets na-emeri Super Bowl.